Kedu mgbe ụlọ ọrụ kwesịrị ịbanye na Social Media? | Martech Zone
Ọtụtụ mkparịta ụka anyị na Corporate Blogging BlogINDIANA nnọkọ bụ mgbe ole ụlọ ọrụ kwesịrị ịgbaba na mgbasa ozi mmekọrịta, otú ha kwesiri itinye aka na soshal midia, na otu ha kwesiri jikwaa aha ha n'ịntanetị. Maka ederede taa, aga m ewere ajụjụ a mgbe ole.
Ọtụtụ ndị mmadụ ga - asị, taa! Ugbu a! Ternyaahụ! Achọghị m. M na-adụ ọdụ na mgbasa ozi mmekọrịta na ịde blọgụ abụghị atụmatụ ahịa, ha bụ atụmatụ ụlọ ọrụ. Ọ bụghị naanị itinye onwe gị n'ahịa ka wụkwasị na bandwagon kachasị ọhụrụ na ndị na-azụ ahịa ga-enwetara gị. Mgbasa mgbasa ozi na-ewe oge, atụmatụ na ezigbo ego (ma ngwaọrụ ma ndị mmadụ).
Foto si AllPosters.
Social Media chọrọ ọkwa nghọta na eziokwu nke ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị enwe ntụsara ahụ. Ndị ụlọ ọrụ anaghị aza naanị ndị ahịa - ha na-aza asọmpi, ụlọ ọrụ, ndị na - ekenye ya, ndị ọrụ na atụmanya. Yabụ, mmadụ mgbasa ozi nwere ike ọ ga-emetụta ngalaba ọ bụla na ụlọ ọrụ gị na ndị ọrụ na ọkwa ọ bụla. Ga-akwadebe.
Ọ bụrụ n’ịche na ị ga - aga nke ọma site na ịtụda blọọgụ WordPress, ị ga - ehie ụzọ. Nwere ike itinye aka na ntanetị na-eme ihere na ị ga-enwe oge siri ike karị igwu ala karịa ka ị ghara itinye mkpịsị ụkwụ gị niile. Gaa na onye mgbasa ozi mgbasa ozi nke na-aghọta ọtụtụ ngwaọrụ dị na ahịa na otu ị ga-esi erite uru na nke ọ bụla ma ọ bụ site na njikọta niile.
Ga-etinyerịrị ndị isi niile na ụlọ ọrụ gị - ndị ahụ nke atụmatụ nke ụlọ ọrụ. Y’oburu n’inweghi nghọta na izu zuo site n’elu nkedo ahu, nghazi site na uzo ozo gha gha ada. Na-etinye Ire ahia n’usoro mgbasa ozi mgbasa ozi gị na-enyefe ha igodo ụlọ ime ụlọ ahụ - ha nwere ike ha agaghị amata mmetụta na ahịa, nkwado ndị ahịa, afọ ojuju ndị ahịa, afọ ojuju ndị ọzọ, wdg.
Aga m ekwu ya ọzọ, ihe egwu nke azụmahịa na-abanye na mpaghara mgbasa ozi na ịda mba dị njọ karịa ịghara ịbanye ma ọlị.
Nke a ọ pụtara na ụlọ ọrụ ekwesịghị ịbanye na mgbasa ozi mmekọrịta?
Mba… mana ekwenyere m na nke a bụ ya mere na a nkuchi nwa nke nkwekọrịta na ntanetị dị ka Customlọ Ọrụ Ahịa nke Companylọ Ọrụ. Ndị edemede nke nkwekọrịta a ọ ghọtara na ụfọdụ ụlọ ọrụ enweghị ike ịbịanye aka na nkwekọrịta dị ka nke a?
Ọ bụ ihe na-emenye ụjọ ma na-echetara m ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ n'okporo ụzọ ugbu a - ha na-ekwe nkwa ihe niile n'okpuru anyanwụ na obere ihe iji nweta. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ike ọ gaghị enwe ike ịkwụ ụgwọ nkwekọrịta dịka nke a! Onwe m, m ga-ahụ ụlọ ọrụ m n'anya ịbanye na nkwekọrịta ahụ - mana amaara m na ndị na-ekenye ya na ndị isi ga-agba ya.
Companylọ ọrụ m anaghị etinye ntinye mgbasa ozi na njirimara na-agbasa ala maka ụjọ nke asọmpi ahụ na-agbanye ya. Oke anyị dị oke, ndị ahịa anyị dị ọnụ ala, asọmpi ahụ dịkwa egwu. Na-egbu oge ịbụ opaque nwere ike inye anyị ọnụ anyị kwesịrị ijide onye ahịa ọzọ na-esote tupu asọmpi ahụ. Ngọnarị: Adịghị m azụta atụmatụ a n'ụzọ zuru ezu mana ana m asọpụrụ ahụmịhe nke ụlọ ọrụ na-elekọta ụlọ ọrụ anyị. E kwuwerị, ọ bụ ego ha ka anyị na-agba.
N'aka nke ọzọ, nsogbu nke ịghara ịbanye na mgbasa ozi mmekọrịta bụ na asọmpi gị ma ọ bụ gị afọ ojuju ndị ahịa (ma ọ bụ ka njọ… ọrụ) ga-eme! Enwere ezigbo ihe atụ nke ụlọ ọrụ ndị gbochiri mwakpo nke nkatọ by na-ewepụ uwe mgbokwasị ha ma na-amaba n’agha.
N'ikpeazụ, ekwenyere m (enwere m olileanya) ụlọ ọrụ niile ga-agbanye onwe ha iji kwado onwe ha na nkwekọrịta dịka Customlọ Ọrụ Ahịa Companylọ Ọrụ. Amaara m na maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, nke ahụ abụghị taa.
Gaa n'ihu Nkebi nke 2 nke 3!
Tags: ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ mediaụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ mediaelekọta mmadụ media
100% kwenyere na corp wide buyin, ọkachasị na ọkwa dị elu, yana otu ihe nke ọdịda. Ọ na-ewe ọtụtụ ego nke PR iji mebie ịbanye ọkara ọkara abanye na mgbasa ozi mmekọrịta, ma ọ bụrụ na edozi nsogbu edozi ihe kpatara ya, ọ ga-emeghachi n'ụdị ọzọ n'okporo ụzọ. N'aka nke ọzọ, ịzụrụ dị otú ahụ, maka ihe nwere ọnụ ala ntinye, yana ọhụụ nke ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ ihe siri ike. Naanị ihe ọ na-egosi na radar, ma ọ bụrụ na ịga n'ihu nwere ike ịpụta, ọ bụghị ntụgharị obi na uche ọ bụla. Ma ọ dịkarịa ala, ọ gaghị adị mma, ruo mgbe ihe dị ezigbo mma, ma ọ bụ ihe ọjọọ mere.
N'ihe nkwekọrịta ụlọ ọrụ ndị ahịa na-aga… ndị ọka iwu ga-enwe ụbọchị ubi na nke ahụ. Nwere ike iche n'echiche ekwentị, ụlọ ọrụ mkpuchi, ụlọ ọrụ dị elu, ma ọ bụ ọbụna ndị na-arụ ọrụ n'etiti etiti na-ekwenye na usoro ndị a, na-eche na ha ghọtara ngabiga nke ụdị a, ọ bụghị naanị ụdị ihe ị ga-eme? O nwere otutu ikike di na ezi okwu… mana ewere ya dika okwu, kwuo okwu nke oma maka ndi oka iwu, ndi ndoro ndoro-ndoro ochichi, ma maka ihe omuma nke oma, kamakwa ndi n’eme ndi ozo, ma ndi n’edota ndi mmadu n’ozuzu ha.
Nkwekorita ụlọ ọrụ ndị ahịa abụghị ihe dị njọ, mana nsonaazụ ndị a na-atụghị anya ya dị oke mma, belụsọ na naanị egbugbere ọnụ ya na-arụ ọrụ.